1 Ihe E Mere 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Ihe E Mere 7:1-40
7 Ụmụ Ịsaka bụ Tola+ na Pua,+ Jeshọb na Shimrọn,+ mmadụ anọ. 2 Ụmụ Tola bụ Ọzaị na Refeya na Jiriel na Jamaị na Ibsam na Shemuel, bụ́ ndị isi nke ụlọ ndị nna nna ha. Ná ndị Tola mụrụ, e nwere ndị dimkpa bụ́ dike, dị ka usoro ọmụmụ ha si dị. Ha dị puku mmadụ iri abụọ na abụọ na narị isii n’ụbọchị Devid.+ 3 Ụmụ Ọzaị bụ Izrahaya; ụmụ Izrahaya bụ Maịkel na Obedaya na Joel, Ịs-shaya, [?], mmadụ ise, ha niile bụ ndị isi. 4 Ha na ụmụ ha, dị ka usoro ọmụmụ ha si dị, dị ka ụlọ ndị nna nna ha si dị, nwere ìgwè ndị agha maka ịga agha, ndị dị puku mmadụ iri atọ na puku isii, n’ihi na ha lụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, mụọkwa ọtụtụ ụmụ.+ 5 Ụmụnne ha ndị si n’ezinụlọ niile nke Ịsaka bụ ndị dimkpa na ndị dike,+ ha dị puku iri asatọ na puku asaa bụ́ ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị ka usoro ọmụmụ ha si dị.+ 6 Ụmụ Benjamin+ bụ Bila+ na Bika+ nakwa Jedayel,+ mmadụ atọ. 7 Ụmụ Bila+ bụ Ezbọn na Ọzaị na Ọziel na Jerimọt na Aịraị, mmadụ ise, ndị isi nke ụlọ ndị nna nna ha, ndị dimkpa bụ́ ndị dike; ha dị puku mmadụ iri abụọ na abụọ na mmadụ iri atọ na anọ+ bụ́ ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị ka usoro ọmụmụ ha si dị. 8 Ụmụ Bika bụ Zemaịra na Joash na Elịiza na Elio-inaị na Ọmraị na Jeremọt na Abaịja na Anatọt na Alemet, ndị a niile bụ ụmụ Bika. 9 Ndị e debara aha ha n’akwụkwọ dị ka usoro ọmụmụ ha si dị,+ bụ́ ndị isi nke ụlọ ndị nna nna ha, ndị dimkpa bụ́ dike, dị puku mmadụ iri abụọ na narị abụọ. 10 Ụmụ Jedayel+ bụ Bilhan; ụmụ Bilhan bụ Jiọsh na Benjamin na Ihọd na Keneana na Zitan na Tashish nakwa Ahishaha. 11 Ndị a niile bụ ụmụ Jedayel, dị ka ndị bụ́ ndị isi n’ụlọ ndị nna nna ha si dị, bụ́ ndị dimkpa bụ́ dike,+ puku mmadụ iri na asaa na narị abụọ bụ́ ndị na-aga agha. 12 Ụmụ Iye+ bụ Shọpim+ na Họpim;+ ndị Hushim bụ ụmụ Eha. 13 Ụmụ Naftalaị+ bụ Jaziel+ na Gunaị+ na Jiza nakwa Shalọm,+ ụmụ Bilha.+ 14 Ụmụ Manase+ bụ Asriel, onye iko ya bụ́ nwaanyị Siria mụụrụ ya. (Ọ bụ nwaanyị ahụ mụrụ Mekia+ nna Gilied. 15 Mekia wee lụọrọ Họpim nwaanyị, lụọkwara Shọpim. Aha nwanne ya nwaanyị bụ Meaka.) Aha nke abụọ bụ Zelofehad,+ ma, ọ bụ ụmụ nwaanyị ka Zelofehad mụrụ.+ 16 Ka oge na-aga, Meaka, nwunye Mekia, mụrụ nwa nwoke wee gụọ ya Piresh; aha nwanne ya nwoke bụ Shiresh; ụmụ ya bụ Yulam na Rikem. 17 Ụmụ Yulam bụ Bidan. Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Gilied nwa Mekia nwa Manase. 18 Nwanne ya nwaanyị bụ Hamoleket. Ọ mụrụ Ishhọd na Abi-iza+ nakwa Mala. 19 Ụmụ Shemaịda bụ Ahayan na Shikem na Likhaị na Anayam. 20 Ifrem+ mụrụ Shutela,+ Shutela amụọ Bired, Bired amụọ Tehat, Tehat amụọ Elieda, Elieda amụọ Tehat, 21 Tehat amụọ Zebad, Zebad amụọ Shutela. Ifrem mụkwara Iza na Iliad. Ndị Gat+ a mụrụ n’ala ahụ gburu ha n’ihi na ha gbadatara ịchịrị anụ ụlọ ha. 22 Ifrem nna ha wee ruo uju ọtụtụ ụbọchị,+ ụmụnne ya wee na-abịa na-akasi ya obi. 23 E mesịa, ya na nwunye ya nwere mmekọahụ, o wee tụrụ ime+ mụọ nwa nwoke. Ma ọ gụrụ ya Beraya, n’ihi na ọdachi dakwasịrị ya+ mgbe ya na nwunye ya bi. 24 Nwa ya* nwaanyị bụ Shiera, bụ́ onye wuru Bet-horọn,+ nke ndịda+ na nke mgbago,+ wuokwa Ọzen-shiera. 25 Ọ mụkwara Rifa, tinyere Rishef,* Rishef amụọ Tila, Tila amụọ Tehan. 26 Tehan amụọ Ledan, Ledan amụọ Amaịhọd, Amaịhọd amụọ Elishama, 27 Elishama amụọ Nọn,+ Nọn amụọ Jehọshụa.+ 28 Ihe nketa ha na ebe ndị ha bi bụ Betel+ na obodo nta ya niile na Neeran+ nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ nakwa Giza+ na obodo nta ya ndị dị n’ebe ọdịda anyanwụ, nakwa Shikem+ na obodo nta ya niile ruo Geza na obodo nta ya niile; 29 nakwa Bet-shian+ na obodo nta ya niile, Teanak+ na obodo nta ya niile, Megido+ na obodo nta ya niile, Dọọ+ na obodo nta ya niile, bụ́ ndị dị n’akụkụ ụmụ Manase. N’ebe ndị a ka ụmụ Josef+ nwa Izrel biri. 30 Ụmụ Asha+ bụ Imna+ na Ishva na Ishvaị+ na Beraya;+ Sira bụ nwanne ha nwaanyị. 31 Ụmụ Beraya bụ Hiba na Malkiel, bụ́ nna Biezeit. 32 Ma Hiba mụrụ Jaflet na Shoma na Hotam, mụọkwa Shua bụ́ nwanne ha nwaanyị. 33 Ụmụ Jaflet bụ Pesak na Bimhal na Ashvat. Ọ bụ ndị a bụ ụmụ Jaflet. 34 Ụmụ Shima bụ Ehaị na Roga, Jehọba na Eram. 35 Ụmụ Hilem nwanne ya bụ Zofa na Imna na Shilesh nakwa Emal. 36 Ụmụ Zofa bụ Sua na Hanifa na Shual na Biraị nakwa Imra, 37 Biza na Họd na Shama na Shilsha na Itran na Beira. 38 Ụmụ Jita bụ Jefọne na Pispa na Era. 39 Ụmụ Ọla bụ Era na Haniel na Rizaya. 40 Ọ bụ ndị a niile bụ ụmụ Asha, ndị isi+ nke ụlọ ndị nna nna ha, ndị dimkpa bụ́ dike,+ ndị a họrọ ahọ, ndị isi nke ndị isi niile; e debara aha ha n’akwụkwọ ndị agha na-aga agha dị ka usoro ọmụmụ ha si dị.+ Ha dị puku mmadụ iri abụọ na puku isii.+
“Ya” pụrụ ịbụ Ifrem ma ọ bụ Beraya.
Ọ pụrụ ịbụ na Rifa na Rishef bụ ụmụ Beraya.
1 Ihe E Mere 7